Ụdị DMAA Rw (13803-74-2) 1,3-dimethylamylamine | AASraw
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / DMAA ntụ ntụ
SKU: 13803-74-2. Category: Ihe nkuzi
1,3-dimethylamylamine (DMAA) bu ihe a na-emepụta ihe na-emeputa ihe na-eme ka ihe di iche iche na-eri ihe iji meziwanye onu egwuregwu ma nye ume.
DMAA Raw ntụ ntụ video
Raw DMAA ntụ ntụ isi agwa
aha: DMAA ntụ ntụ
Molekụla Formula: C7H17N.HCl
Ọbara arọ: 151.68
Uzu DMAA uzuzu in ndị steroid okirikiri
DMAA raw ntụ ntụ aha
Methylhexanamine nke a maara dị ka 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) ma ọ bụ dimethylamylamine (DMAA).
Ụdị njirimara nke 1,3-DMAA dị na ntanetị 10-20mg na n'ikpeazụ na-abịaru 40-60mg kwa ụbọchị, enweghi ihe akaebe ọ bụla iji kwadoro ụdị usoro ọgwụgwọ a ma o yiri ka ọ bụ ihe usoro dosages maka 1,3-DMAA na ahịa.
A maara 1,3-DMAA ka ọtụtụ ụlọ ọrụ egwuregwu machie ya n'ihi ụdị amphetamine ya, ma ghara iji ya mee ihe site na ndị na-eme egwuregwu.
Ndị ikom asatọ gwara ụlọ nyocha na ụtụtụ na-esochi ngwa ngwa ngwa ngwa ma nata otu ọgwụ 25 mg nke DMAA. A na-anakọta ọbara ọbara n'omume na site na 24 awa mgbe post-DMAA ghọtara ma nyochaa maka itinye DMAA plasma site na iji nlezianya chromatography-mass spectros. Ichere obi obi, mgbali elu, na okpomọkụ ahụ.
E wepụrụ otu isiokwu site na nchịkọta data site na ọkwa ọkwa DMAA. Nchoputa nke ndi ozo asaa ndi ozo gosiri na DMAA nwere nchikota okwu nke 20.02 ± 5 L ∙ hr-1, olu nke nkesa nke 236 ± 38 L, na nkeji ndu nke 8.45 ± 1.9 hr. Oge oge, oge nkwụsịtụ nke DMAA na mgbasa ozi na-esote nchịkwa ndị ọzọ, dịgasị iche n'etiti ndị na-agụ ma na-enwe ihe dịka 8 nkeji (0.14 ± 0.13 hr). Echere ọnụ ọgụgụ DMAA kasị elu maka isiokwu niile n'ime 3-5 awa ndị na-esote mmetọ ma dị nnọọ yiri na isiokwu, na - enwe mmetụta nke 70 ng®mL-1. Ọ bụ ọgwụgwọ DMAA adịghị emetụta ọnụ ọgụgụ obi, mgbali elu, na okpomọkụ ahụ.
Ịdọ aka ná ntị na DMAA raw ntụ ntụ
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nri na Ọgwụ nke United States (FDA) na-eme ihe niile ọ nwere ike ime iji kpochapụ nkesa na ịzụta ihe mgbakwunye nri niile nke nwere ihe na-akpali akpali nke a na-ejikarị eme ihe dị arọ dimethylamylamine (DMAA).
DMAA bụ organic organic na-eji ngwaahịa ndị na-akpata ọnwụ dị arọ ma ọ bụ mmepụta ahụ. Otú ọ dị, ingredient nwere ike ịkpata mmetụta ndị siri ike, dị ka:
Nsogbu na-enye nsogbu
Tightening nke obi
Enweela ngụkọta nke ọrịa 86 nke ọrịa ma ọ bụ ọnwụ metụtara ikikere DMAA, dịka FDA si kwuo. Ụfọdụ ọrịa gụnyere nsogbu obi na usoro ụjọ ma ọ bụ ọrịa uche, ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe àmà na-egosi na DMAA bụ kpọmkwem ihe kpatara ọnọdụ ndị a.
DMAA raw ntụ ntụ Ntuziaka ndị ọzọ:
DMAA (1,3-dimethylamylamine) bu ihe omumu amphetamine nke e jiri zoo ahia n'oru egwuregwu na ihe ndi na-efu ya, otutu nke eji ere ihe dika nri. DMAA abụghị ihe na-edozi ahụ, ma ngwaahịa ndị DMAA na-ere ahịa dị ka ihe mgbakwunye nri bụ iwu na-akwadoghị ma ahịa ha megidere iwu ahụ.
A makwaara dị ka methylhexanamine ma ọ bụ geranium wepụ, DMAA na-emekarị ka ọ bụrụ "ihe" stimulant; Otú ọ dị, FDA amaghị banyere sayensị ọ bụla a pụrụ ịdabere na ya na-egosi na DMAA dị adị na osisi. Ọ bụ ezie na a kwadoro DMAA n'otu oge ka ọ bụrụ ọgwụ maka nkwụsị aka, ọ gaghịzi akwado ya maka ojiji a, ọ dịghịkwa eji ọgwụ DMAA eme ihe taa. DMAA, karịsịa na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali dị ka caffeine, pụrụ ịbụ ihe ize ndụ nke ndị na-azụ ahịa. Ịnweta DMAA nwere ike ịmalite mgbali ọbara ma mee ka nsogbu obi na-esite na mkpụmkpụ nke ume na ike na-agbanye obi n'ime obi.
FDA na-aga n'ihu na-enye ndị na-azụ ahịa ndụmọdụ ka ha ghara ịzụta ma ọ bụ jiri ngwaahịa ndị ahịa dị ka ihe mgbakwunye nri nke nwere DMAA n'ihi nsogbu ahụ ike ha na-eweta.
Dabere na ụfọdụ n'ime azọrọ nke ndị na-emepụta ihe mgbakwunye na ngwaahịa DMAA, 1,3-dimethylamylamine nwere ike ịsị na ọ bụ isi na-arụ ọrụ dị ka ihe na-akpali akpali. Uru ndị dị na ngwaahịa ndị a nwere ike ịdaba na mmelite nke ike uche.
N'ihi mmetụta ya na-akpali akpali, DMAA na-aghọwanye ewu ewu na obodo ahụ na-ewuli ozu dị ka mgbatị mmemme mgbatị.
DMAA na-akwalite ike. Nyocha 2011 gosiri na DMAA na-eme ka ọbara mgbali elu na-enweghị mmụba obi. Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime usoro ndị bụ isi nke DMAA na-akpali ahụ. Nyocha ọzọ 2012 gosipụtara na e gosipụtara na DMAA enweghi mmetụta na ọbara mgbali elu mgbe ị naghị ewere ya. Nke a ga-apụta na mwepụ DMAA na-eme ka ọbara mgbali elu ka ọ na-eji ya, ma ozugbo mmetụta ya na-agbanye ọbara mgbali elu laghachi na ọkwa izu ike nkịtị .
DMAA nwere ike inyere aka ọkụ. Ihe mgbakwunye nri nke nwere DMAA, OxyELITE Pro, nyere aka na ntukpu anụ ahụ na ndị agadi na-eto eto 32 mgbe ha na-ekwupụta otu capsule kwa ụbọchị maka ụbọchị iri na anọ. DMAA na-amụba ụba abụba na ụba nke okpomọkụ na 12 ndị okenye, nke a na-eche na ọ ga-eduga ahụ abawanye uru na ogologo oge.
DMAA nwere ike melite arụmọrụ anụ ahụ. Na oke, akwa doses nke mgbakwunye ihe oriri nke nwere DMAA mere ka mmezi mmega ahụ dị mma. Otú ọ dị, mgbe izu 4 na-eri kwa ụbọchị, ọ na-efunahụ ya.
DMAA nwere ike melite ncheta oge mkpirikpi. Otu nnyocha 2015 nke e bipụtara na Journal of Athletic Training gosiri na njiri nke 5.5 g nke ihe mgbakwunye ihe oriri nke nwere DMAA na-eme mgbanwe na ncheta oge dị mkpirikpi.
III. DMAA raw ntụ ntụ HNMR
Raw DMAA raw ntụ ntụ Marketing
Esi zụta DMAA ntụ ntụ si aasraw
AAS raw na-enye 98% DMAA raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka oral ojiji.
Raw DMAA ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
5 g creatine 5 g na 200-400 mg caffeine 3.5 g beta alanine (tingles plus na-egbochi ike ọgwụgwụ a na-ekwu) 6 g citrulline malate (bu pump) 1.2 g ALCAR (na-akpali akpali na ilekwasị anya) DMAA 50 mg or .050 g Flavored with zero cal propel mix
Ikwesiri ịtụle nke a ka ịzụta ọnụ ọgụgụ. AKỤKỌ DMAA NKE A GA-ECHI KWU. Naanị m na-agbakwunye DMAA otu ugboro n'izu n'ihi na ị chọghị inwe mmetụta na ịdabere na mgbatị tupu ọ na-eme ka obi dị gị mma ịghara ịdabere na ya ma ọ bụrụ na ejiri ya ugboro ugboro.
Kedu ihe DMAA ntụ ntụ ji mee ihe na bodybuilding?